တဈခါက အာဖရိကတောတှငျးမှာရှိတဲ့ လူမြိုးစုခေါငျးဆောငျတဈယောကျဟာ သူ့ရဲ့ ငယျကြှနျတဈယောကျကို ချေါပွီး ဒီလိုခိုငျးစတေယျ
"ငယျကြှနျကွီး မွို့က အနီးဆုံးဈေးမှာ ငါ့အတှကျ အကောငျးဆုံးအသားသှားဝယျခြေ"
အဲဒီလိုနဲ့ ငယျကြှနျဟာ ဈေးကိုထှကျခှာသှားတယျ။ တခဏအကွာမှာတော့ သူဟာ တိရစ်ဆာနျတဈကောငျရဲ့ လြှာကို ယူဆောငျပွီးပွနျလာခဲ့တယျ။ အဲဒီလိုနဲ့နောကျတဈနမှေ့ာလညျး ခေါငျးဆောငျကွီးဟာ တပညျ့ကို ချေါပွနျတယျ။
"ဟကေ့ောငျ လြှာက တျောတျောစားကောငျးတာပဲကှ၊ ဒီတဈခါတော့ အညံ့ဆုံးအသားရှာဝယျခဲ့ခညျြ"
ငယျကြှနျဟာ "ဟုတျကဲ့" ဆိုတဲ့စကားတဈခှနျးကိုသာပွောပွီး ထှကျခှာသှားပွနျတယျ။ ဒီတဈကွိမျမှာလညျး သူဟာ လြှာကိုသာ ဝယျယူလာခဲ့ပွနျတယျ။ အဲဒီအခါမှာတော့ ခေါငျးဆောငျကွီးက ဒီလိုပွောတယျ
"ဟကေ့ောငျ မငျ့ဟာက အကောငျးဆုံးအသားကလဲ လြှာပဲ အဆိုးဆုံးအသားဝယျခဲ့ပါဆိုတော့လညျး ဒီလြှာပဲ မငျးငါကို ငတုံးမြားမှတျနလေား" အဲဒီလို ခေါငျးဆောငျရဲ့စကားကို ကွားတဲ့အခါ ငယျကြှနျက ဒီလိုပွနျပွောတယျ။
"ခေါငျးဆောငျကွီးခငျဗြား။ လူတဈယောကျဟာ လြှာကွောငျ့ တပါးသူတှကေို ပြျောရှငျစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ လြှာဟာ အကောငျးဆုံးအသားပါပဲ။ အဲဒီလြှာကွောငျ့ပဲ တဖကျလူကို ဝမျးနညျးအားငယျအောငျ၊ စိတျဓါတျပကျြပွားအောငျ လုပျလို့ရပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ လြှာဟာ အဆိုးဆုံးသော အသားပါပဲ"
ကြှနျတျောတို့အားလုံးဟာလညျး လြှာနဲ့တငျစားတဲ့ နှုတျထှကျစကား တှကေို ပိုငျဆိုငျကွသူခညျြးပဲဖွဈတယျ။ လြှာကိုယျစီ ပိုငျဆိုငျကွပမေယျ့လညျး တခြို့တှကေတော့ အမုနျးတရား၊ လိမျညာခွငျး၊ အပုပျခခြွငျး၊ ခွောကျလှနျ့ခွငျး၊ ကွှားဝါခွငျး၊ ဆဲရေးခွငျး၊ မုသားပွောခွငျး၊ တလှဲအထငျရောကျစခွေငျး၊ ကုနျးခြောခွငျး စတဲ့ မကောငျးသောအရာတှကေိုသာ ပှငျ့အံထှကျကလြာလရှေိ့ကွတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ မိမိစိတျရဲ့ သိမျဖငျြးခွငျးကို ဖျောပွနတေဲ့ လြှာပိုငျရှငျတှပေဲဖွဈတယျ။
ဆနျ့ကငျြဘကျအားဖွငျ့ ကောငျးသောလြှာပိုငျရှငျတှဟော လမျးညှနျခွငျး၊ အားပေးခွငျး၊ နှုတျအားဖွငျ့ စောငျမခွငျး၊ တဈပါးသူခှနျအားတကျကွှဖှယျစကားကိုသာ ပွောဆိုခွငျး၊ မှနျသောစကားကိုသာပွောခွငျး စတဲ့ ကောငျးသော နှုတျထှကျစကားတှကေို ပွောကွားကွပွနျတယျ။ သူတို့ရဲ့ စိတျနစေိတျထားကိုလညျး သူတို့လြှာက ကိုယျစားပွုကွပွနျတယျ။
အဲဒီလို ကောငျးခွငျး/ဆိုးခွငျး အစှနျးနှဈပါးကို ပိုငျဆိုငျတဲ့လြှာကနေ ပှငျ့အံလာတဲ့ စကားတဈခှနျးကွောငျ့ အမြားသူငါ ကဲ့ရဲ့စရာ ဖွဈပေးလာသလို၊ အဲဒီလြှာကွောငျ့ပဲ အမြားသူငါ ခြီးမှမျးဖှယျဖွဈလာကွပွနျတယျ။ လြှာကွောငျ့ ဂုဏျသိက်ခာ ကဆြငျးနိုငျသလို၊ အဲဒီလြှာကွောငျ့ပဲ လူ့လောကအလညျ ပှဲလညျတငျ့နိုငျပွနျတယျ။
" Words can hurt or heal. Be sure to taste your words before you spit them out. "
စကားလုံးတှဟော တဈဖကျသားကို ကုစားပေးနိုငျသလို၊ နာလညျး နာကငျြစနေိုငျတယျ။ မငျးပါးစပျထဲက စကားလုံးတှေ ထှေးမထုတျခငျသခြောအောငျအရသာခံကွညျ့လိုကျပါ။
ကြှနျတျောတို့ပွောသမြှနှုတျထှကျစကားတိုငျးဟာ နောကျဆကျတှဲ အကြိုးဆကျတှရှေိနတေတျကွတယျ။ အဲဒီစကားလုံးတှဟော တဈဖကျသားရဲ့ဘဝကို စုတျပွတျနိမျ့ကြ သှားစနေိုငျသလို ကိုယျ့စကားကွောငျ့ တဈဖကျလူရဲ့ ဘဝတဈခုလုံးကိုတောငျ ပွောငျးလဲ မွှငျ့တငျပေးနိုငျတယျလို့ ဆိုလိုတယျ။
ကြှနျတျောတို့တှဟော မိမိလြှာကို မိမိပွနျလညျ ဆနျးစဈကွညျ့ဖို့တော့ လိုနသေူမြားပဲဖွဈတယျ။
တစ်ခါက အာဖရိကတောတွင်းမှာရှိတဲ့ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ ငယ်ကျွန်တစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး ဒီလိုခိုင်းစေတယ်
"ငယ်ကျွန်ကြီး မြို့က အနီးဆုံးဈေးမှာ ငါ့အတွက် အကောင်းဆုံးအသားသွားဝယ်ချေ"
အဲဒီလိုနဲ့ ငယ်ကျွန်ဟာ ဈေးကိုထွက်ခွာသွားတယ်။ တခဏအကြာမှာတော့ သူဟာ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဲ့ လျှာကို ယူဆောင်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာလည်း ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာ တပည့်ကို ခေါ်ပြန်တယ်။
"ဟေ့ကောင် လျှာက တော်တော်စားကောင်းတာပဲကွ၊ ဒီတစ်ခါတော့ အညံ့ဆုံးအသားရှာဝယ်ခဲ့ချည်"
ငယ်ကျွန်ဟာ "ဟုတ်ကဲ့" ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုသာပြောပြီး ထွက်ခွာသွားပြန်တယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း သူဟာ လျှာကိုသာ ၀ယ်ယူလာခဲ့ပြန်တယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ ခေါင်းဆောင်ကြီးက ဒီလိုပြောတယ်
"ဟေ့ကောင် မင့်ဟာက အကောင်းဆုံးအသားကလဲ လျှာပဲ အဆိုးဆုံးအသားဝယ်ခဲ့ပါဆိုတော့လည်း ဒီလျှာပဲ မင်းငါကို ငတုံးများမှတ်နေလား" အဲဒီလို ခေါင်းဆောင်ရဲ့စကားကို ကြားတဲ့အခါ ငယ်ကျွန်က ဒီလိုပြန်ပြောတယ်။
"ခေါင်းဆောင်ကြီးခင်ဗျား။ လူတစ်ယောက်ဟာ လျှာကြောင့် တပါးသူတွေကို ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လျှာဟာ အကောင်းဆုံးအသားပါပဲ။ အဲဒီလျှာကြောင့်ပဲ တဖက်လူကို ၀မ်းနည်းအားငယ်အောင်၊ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လျှာဟာ အဆိုးဆုံးသော အသားပါပဲ"
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလည်း လျှာနဲ့တင်စားတဲ့ နှုတ်ထွက်စကား တွေကို ပိုင်ဆိုင်ကြသူချည်းပဲဖြစ်တယ်။ လျှာကိုယ်စီ ပိုင်ဆိုင်ကြပေမယ့်လည်း တချို့တွေကတော့ အမုန်းတရား၊ လိမ်ညာခြင်း၊ အပုပ်ချခြင်း၊ ခြောက်လှန့်ခြင်း၊ ကြွားဝါခြင်း၊ ဆဲရေးခြင်း၊ မုသားပြောခြင်း၊ တလွဲအထင်ရောက်စေခြင်း၊ ကုန်းချောခြင်း စတဲ့ မကောင်းသောအရာတွေကိုသာ ပွင့်အံထွက်ကျလာလေ့ရှိကြတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိစိတ်ရဲ့ သိမ်ဖျင်းခြင်းကို ဖော်ပြနေတဲ့ လျှာပိုင်ရှင်တွေပဲဖြစ်တယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ကောင်းသောလျှာပိုင်ရှင်တွေဟာ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ နှုတ်အားဖြင့် စောင်မခြင်း၊ တစ်ပါးသူခွန်အားတက်ကြွဖွယ်စကားကိုသာ ပြောဆိုခြင်း၊ မှန်သောစကားကိုသာပြောခြင်း စတဲ့ ကောင်းသော နှုတ်ထွက်စကားတွေကို ပြောကြားကြပြန်တယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကိုလည်း သူတို့လျှာက ကိုယ်စားပြုကြပြန်တယ်။
အဲဒီလို ကောင်းခြင်း/ဆိုးခြင်း အစွန်းနှစ်ပါးကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့လျှာကနေ ပွင့်အံလာတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် အများသူငါ ကဲ့ရဲ့စရာ ဖြစ်ပေးလာသလို၊ အဲဒီလျှာကြောင့်ပဲ အများသူငါ ချီးမွမ်းဖွယ်ဖြစ်လာကြပြန်တယ်။ လျှာကြောင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းနိုင်သလို၊ အဲဒီလျှာကြောင့်ပဲ လူ့လောကအလည် ပွဲလည်တင့်နိုင်ပြန်တယ်။
စကားလုံးတွေဟာ တစ်ဖက်သားကို ကုစားပေးနိုင်သလို၊ နာလည်း နာကျင်စေနိုင်တယ်။ မင်းပါးစပ်ထဲက စကားလုံးတွေ ထွေးမထုတ်ခင် သေချာအောင်အရသာခံကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ပြောသမျှနှုတ်ထွက်စကားတိုင်းဟာ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေရှိနေတတ်ကြတယ်။ အဲဒီစကားလုံးတွေဟာ တစ်ဖက်သားရဲ့ဘ၀ကို စုတ်ပြတ်နိမ့်ကျ သွားစေနိုင်သလို ကိုယ့်စကားကြောင့် တစ်ဖက်လူရဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကိုတောင် ပြောင်းလဲ မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မိမိလျှာကို မိမိပြန်လည် ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့တော့ လိုနေသူများပဲဖြစ်တယ်။
Read times Last modified on Wednesday, 13 October 2021 09:02